I-FNB nezinhlelo zokuthuthukisa amakhasimende. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Leli bhange lethule izifundo za-online kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje ezizotholakala ngokubambisana ne-Udemy. Abafisa ukwenza ezinye zalezi zifundo eziwu-400 ezikhethiwe kuzodingeka banikele ngoR50 kuphela.
UNkk uHeloise Janse Van Rensburg, inHloko yokuPhatha amaKhasimende ophikweni lwe-eBucks, uthi nakuba beqale ngokwethula izifundo ngokubambisana nalesi sikhungo saseMelika kodwa basaxoxisana nezinye izikhungo abazobuye bazethule ngokuhamba kwesikhathi. Uthe baphezu kwezinhlelo zokwethula izifundo i-mathematics, isayensi nezilimi.
Ngesikhathi izwe livaliwe ngenxa yokubheduka kweCOVID-19 kwagqama kakhulu ukungalingani njengoba kwakunzima ezikoleni eziningi zabantu abamnyama ukuthi izingane zifundele emakhaya ngenxa yokungabi nobuchwepheshe obudingakayo.
Kulezi zinhlelo ezintsha, enye yezinto iFNB ezama ukuzilungisa yiloku, njengoba yethule indlela yokwandisa isibalo sabantu abakwazi ukuhlomula ngokusebenzisa ubuchwepheshe besimanje ngohlelo lokukwazi ukuthenga ama-smartphone, ama-laptop nama-tablet angabizi.
UNkk uMillicent Raikane, inHloko yemiKhiqizo ophikweni iFNB Connect and Service Provider uthi: “Baphakathi kuka-40% no-50% abantu baseNingizimu Afrika abangenawo ama-smartphone. Akuwona wonke umuntu okwazi ukuthola le mihlomulo esikhuluma ngayo nokungakho kumqoka ukuthi senze indlela yokuthi kungambi eqolo ukuthi atholakale. Kunezinhlobo esizihlanganisile nesizidayisa ngamanani aphansi.”
Ngokwezibalo ezikhishwe yileli bhange, kubantu baseNingizimu Afrika abawu-30 million abanama-akhawunti asebhange, abangu-17m kubona bahola ngaphansi kukaR3 000, kuthi abawu-10m bahola phakathi kukaR3 000 noR40 000 besekuthi abanye yilabo abahola ngaphezu kukaR40 000.
Nakuba iFNB ivuma ukuthi kunenqwaba yabantu ecwile ezikweletini kubantu abahola phakathi kukaR3 000 noR40 000 kodwa ikholwa wukuthi lezi zinto ezethulayo zizoyisiza ikhule nawo wonke amakhasimende ayo.
UMnu uRaj Makanjee, isiKhulu esiPhezulu seFNB Retail, uthi: “Kuyiqiniso ukuthi amakhasimende (ahola phakathi kukaR3 000 noR40 000) awasisebenzisi kahle isikweletu, nokuyinto okufanele siwasize ngayo ukuze kuthi uma esenemali ngoba esephungule izikweletu akwazi ukonga nokutshala imali. Sizama indlela yokusiza wonke umuntu ngezindlela ezihlukene. Sibheke lezo zinto esaziyo ukuthi zihlupha amakhasimende ethu.”
Okunye leli bhange elikwethulile wubuchwepheshe obuzosiza umuntu akwazi ukuthola usizo oluphuthumayo olubizwa ngeGuardMe, nelithi ngayo ngenye yezindlela elwa ngayo nokuhlukumeza abantu besifazane nezingane. Isebenzisana nezinkampani zonogada nama-ambulensi kanti luzosebenzisa ucingo.
Kukhona nemidlalo yezinga nohlelo elwenza neStarbucks. Bangu-6.21m abantu abasebenzise i-app yaseFNB ezinyangeni eziyisithupha eziphele ngoDisemba wango-2021.